10 Atụmatụ maka mmeri Gamification Strategy | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 19, 2018 Saturday, October 20, 2018 Douglas Karr
Ndị mmadụ masịrị m. Nye ha a kediegwu ahịa ozi na a ego na ha ga-apụ ... ma-enye ha ohere iji merie baajị na ha profaịlụ na peeji nke na ha ga-alụ ọgụ maka ya. Ana m eme onwe m ihe ọchị ka m na-echegbu onwe m mgbe m gachara adịkwa a mayorship na Foursquare - ọ bụ ihe nzuzu. Nke ahụ bụ naanị ihe gamification na-adabere.
Gịnị kpatara ịgba chaa chaa ji arụ ọrụ?
Gamification na-arụ ọrụ iji mejuo ụfọdụ ebumnuche mmadụ kachasị mkpa: mmata na ụgwọ ọrụ, ọnọdụ, mmezu, asọmpi na mmekorita, igosipụta onwe onye, ​​na enweghị mmasị. Ndị mmadụ na-agụ agụụ maka ihe ndị a ma ụwa ha kwa ụbọchị ma n'ịntanetị. Gamification taps kpọmkwem na nke a.
Bọọlụ bụ otu n'ime ndị egwuregwu na-ere ahịa nke na-enyere ndị ahịa ahịa aka itinye usoro ịme egwuregwu na saịtị ha na ngwa ha. Ha ekesawo akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Mmeri na Gamification: Atụmatụ sitere na Ọkachamara Playbook. Ọ bụ ezigbo ọgụgụ. Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe gbasara ịmepe usoro ịme egwuregwu nke gị:
Mata obodo - Gamification na-achọkarị a na-akwado Community. Ihe na-agụkarị mmadụ agụụ bụ mgbe ndị ọzọ gbaara ya àmà. Ọ dịkwa mkpa ịnwe ndị ọzọ ha na ha ga-asọrịta mpi ma tulee ihe ha rụzuru.
Maapụ ihe mgbaru ọsọ gị - Mgbe ị na-ekepụta ihe ngwọta nke egwuregwu gị, gbaa mbọ hụ na ị mepụtara ihe dabara na etiti etiti ahụmịhe onye ọrụ na ebumnuche azụmaahịa gị.
Na-ebute ihe omume ụzọ ị chọrọ ka ndị ọrụ gị were - bestzọ kachasị mma iji bịaruo nke a bụ site na sistemu ogo dị egwu. Ozugbo ịchọtara Omume maka mmemme gị, ị ga-achọ ịkwado ha dịka uru. Malite na omume kachasị dị ntakịrị ma nye ya ihe '1.' Na-arụ ọrụ ebe ahụ, ekenye ụkpụrụ niile maka ihe ọ bụla.
Zụlite usoro ihe - Isi ihe bụ nnukwu ụzọ iji kwụghachi onye ọrụ ụgwọ maka ime ihe baara gị uru (ntụgharị, zụta, nbudata, kekọrịta). N'ezie, isi okwu nwekwara ike ịbụ ụzọ ndị ọrụ ji akwụ ibe ha ụgwọ. N'ikpeazụ, ha kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka ụzọ isi nye ndị ọrụ ụdị ụfọdụ nke imefu ikike.
Jiri ọkwa - Gbalịa họrọ aha mmado na-amata ọdịiche dị n’etiti ọkwa ọ bụla. Ọ bụ ezie na iji ọnụọgụgụ bụ aha kachasị mfe, dị nkọ, aha na-ejikọtaghị ọnụ na isiokwu nke mmemme gị nwere ike ịdị irè.
Mee ọhụụ na akara ngosi na-adọrọ mmasị - Mgbe ị na-emebe baajị ma ọ bụ ihe ngosi, gbaa mbọ hụ na ọ na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ mmasị. Baajị ahụ kwesịkwara ịdị mkpa maka ndị na-ege ntị na isiokwu nke
ihe omume ahụ.
Tinye ụgwọ ọrụ - rewardgwọ ọrụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla na - akpali ndị ọrụ gị: Ihe, Akara, Trophies, Ihe Ndị A Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ahụ Anya, Ọdịnaya Unlockable, Ngwongwo Digital, Ngwongwo Ahụ, Kupọns, wdg.
Jiri nzaghachi oge - Nzaghachi oge bụ nnukwu ụzọ iji mata ma zaghachi rụzuru ndị ọrụ gị.
Jiri Ngwa Ahịa mebere - Virtual ngwongwo dị ukwuu n'ihi na mgbe “ọkụ” - ihe maka ndị ọrụ na-etinye ha ihe kwupụta.
Ekwentị, Social, na Geo - Mobile, Social Media, na Geographic ezubere iche bụ nnukwu mgbakwunye na mmemme gị mgbe ị nwere ike ijikọ ahụmịhe ahụ niile, kesaa ya, ma lekwasị ya anya site na ọnọdụ.
Bunchball bụ onye na-eweta ọrụ nke ịmekọrịta ọrụ, nke a na-eji eme ka ikere òkè dị elu, itinye aka, ikwesị ntụkwasị obi na ego. Ngwakọta egwuregwu nke Bunchball bụ ọrụ igwe ojii nwere ike ịbawanye ma nwee ntụkwasị obi maka ịntanetị weebụsaịtị, obodo mmekọrịta, yana ngwa mkpanaka. Bunchball achọpụtawo ihe karịrị ijeri omume 20 nke na-eduga n'iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na itinye aka n'ọrụ maka ndị ahịa ha.
Download Winning with Gamification: Atụmatụ sitere na ọkachamara Playbook
Tags: bọọlụahịa gamificationọrụ gamificationgamificationgamification ngwagamification etojuihe eji egwu egwuụgwọ ọrụ gamificationgamification Atụmatụ
Jun 24, 2011 na 3:51 AM
Maka ndị nwere mmasị, Lithium na-etinye webinar Gamification - http://mkt.gs/mg8EQk Wenezdee, June 29, 2011 @ 11:00 AM PDT / 2:00 PM EDT